Nkọwapụta igwe, Ancillary Machine Series, Na-ejuputa igwe - Fineco
Guangdong Fineco Machinery Group Co., Ltd. e guzobere na 2013. Ọ bụ a elu-tech enterprise tụnyere R&D, mmepụta na ahịa nke labeling ngwá na ọgụgụ isi akpaaka na ngwá. Ọ bụkwa ọkachamara na-emepụta nke nnukwu nkwakọ ígwè. Ngwaahịa anyị na-agụnye igwe mpempe akwụkwọ dị iche iche, igwe juputara, igwe mkpuchi, igwe na-agbanye, igwe na-ejide onwe ya na akụrụngwa metụtara ya.
Tọrọ ntọala na 2013
Karịa ngwaahịa 65
Ihe karịrị ijeri 1
FK Big ịwụ Labeling ...
FK Nnukwu cketwụ Label Machine Parameter: U 220 V KW 990W Ogwe 0.3—0.6 Mpa Arọ Ihe: 140KG ike dị 220V / 50HZ igwe nha 850 mm * 410 mm * 720 mm labelụ dayameta Φ76mm-240 mm Nkọwapụta ± 0.5 mm akara ngosi oke (MM) L 6 -150 mm W 15-130 mm ndepụta ntinye aha L 20 -200 mm W 20-150 mm T 20 -320 mm Nkọwa aha ọsọ ọsọ ruo 15-30 / PCS / nkeji Nkọwa igwe: FK Nnukwu ịwụ ịdebanye aha ...
FK617 ọkara akpaka P ...
FK617 Semi automatic Plain Labeling Machine Machine Description: ④ Usoro ndozi FK617 dị mfe ma ọ dị naanị mkpa ịkwaga elu nke wiil pịa, ọnọdụ nke ihe mmetụta aha njirimara na ihe mmịfe slide. Usoro mmezi ahụ erughị nkeji 10, na ịdebanye aha ziri ezi dị elu, ọ na-esikwa ike ịhụ nhụjuanya ahụ. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka ngwaahịa nwere obere mmepụta ihe. FK617 ohere gbasara ala gbasara 0.50 stere. ⑥ Igwe S ...
FK616A ọkara Automatic ...
FK616A Semi Automatic Sealant Labeling Machine Basic Use: ④ FK616A Gbanwee usoro dị mfe: 1.Gbanwee elu nke ịpị efere na ọnọdụ nke cylinder dịka ogo ngwaahịa ahụ si dị, ka cylinder ahụ na-agbanye ngwaahịa ahụ. Gbanwee ọnọdụ nke ihe mmetụta ka mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ wee nwee ike ịpụta. 3 Gbanwee ọnọdụ nke ngwaahịa na ogologo akara akara nke mbụ, ka enwee ike ịpị akara ngosi nke mbụ n'etiti etiti abụọ nke ngwaahịa ahụ. ..
FK616 ọkara Automatic 3 ...
FK616 Semi Automatic 360 ° Rolling Labeling Machine Machine Description ③ FK616 nwere ọrụ ndị ọzọ iji nwekwuo: nhazi ngwa nhazi ma ọ bụ onye nbipute ink-jet, mgbe ị na-ede aha ya, bipụta nọmba mbupụta doro anya, ụbọchị mmepụta, ụbọchị dị irè na ozi ndị ọzọ, nzuzo na ịdebanye aha ga-abụ rụrụ n'otu oge, melite arụmọrụ. FK616 1.Azọ ngbanwe dị mfe ma ọ dị naanị mkpa ịkwaga ịdị elu nke wiil nrụgide. 2. Gbanwee ọnọdụ ebu nke ...
FK807 Akpaaka Horizo ​​...
FK807 Automatic Horizontal Round Bottle Labeling Machine Machine Nkọwapụta Ngwaọrụ FK807 nwere ike ịchọpụta akara izu zuru ezu na akara izu izu, yana akara aha akara abụọ na ihu na azụ nke ngwaahịa ahụ, na ohere dị n'etiti aha ihu na azụ nwere ike gbanwee. Usoro ọrụ na-arụ ọrụ ụkpụrụ: PLC na-eme ihe mgbaàmà ngwaahịa na akara ngosi, wee mepụta mgbaàmà na igwe traction iji malite ịkọ aha. Usoro nyocha: Tinye prod ...
25-250ml / 30-300ml / 50-500ml Liquid Na-ejuputa Ma ...
Anya na-ejuputa na-ejuputa ...
Anya tụlee mejuputa mmepụta akara mmefu ego Req ...
HM1A-2-1-000-FK807 nke ...
HM1A-2-1-000-FK807 akpaka Nucleic acid te ...
6 mmiri mmiri mmiri mmiri ...
6 mmiri mmiri na-ejuputa na ntinye ihe ntinye ederede ...
FK-SX Cache obibi akwụkwọ-3 ...
FK-SX Cache mbipụta-3 nkụnye eji isi mee kaadị ...
FK800 Automatic ewepụghị l ...
FK800 Automatic ewepụghị labeling igwe na inwego ...
FK0001 Automatic Bottl ...
FK0001 Akpaaka Bottle Unscrambler. ...
FK839 Automatic Bottom ...
FK839 Automatic Bottom Production Line Label ...
Nkọwapụta nke Mmanu kalama Labeling Machine na Fineco
Donguan Fineco Automation Technology Co., Ltdnke nwere ike imepụta akwa Wine Bottle Labeling Machine bụ onye ama ama maka aha China "High and New Technology Enterprise" na 2017 ma anyị enwetakwa asambodo ISO90001 na CE. Anyị Wine Bottle La ...
Etu esi eme ihe na afụ na ahịhịa mgbe ị na-etinye igwe eji eme karama?
Kedu otu esi emeso egosipụta na wrinkles mgbe ị na-etinye igwe na-etinye akara karama? Were Fineco's FK803 akpaka gburugburu na-akpọ aha ya dị ka ihe atụ, ka anyị hụ otu esi edozi nsogbu a. 1. Ntughari ...
Y’oburu n’acho nchoputa ulo oru ulo oru ... Anyị nwere ike inyere gị aka
Anyị na-enye ihe ngwọta ọhụụ maka ọganihu na-adigide. Anyị ọkachamara otu na-arụ ọrụ na-amụba arụpụtaghị na-eri irè na ahịa